DMC-G7K Mirrorless DSLM Camera - Panasonic
LUMIX ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ် ကင်မရာ DMC-G7K
4K Photo ဖြင့် "အခိုက်အတန့်လေးများ" ကို ထုတ်ယူသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါ
အသက်ရှူမှားဖွယ် လှပအောင် ရိုက်ကူးပေးမည့် 4K Video ဖြင့် ထိုတန်ဖိုးရှိသည့် အချိန်လေးများကို သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါ။ ထို့ပြင် 4K Photo ဖြင့် အထူး အခိုက်အတန့်လေးများကို ရိုက်ကူးယူလိုက်ပါ။ ထိုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော 4K ကင်မရာသည် ၎င်းတို့ကို ထာဝရအကောင်းဆုံး သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။
4K Video နှင့် 4K Photo — ပြီးပြည့်စုံသော အမှတ်ရဖွယ် အခိုက်အတန့်ကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးလိုက်ပါ
သင်အမှတ်ရလိုသည့် အထူးအခိုက်အတန့်လေးများသည် အချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အရည်အသွေးဖြင့် ဖမ်းယူရိုက်ကူးထားသင့်ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် Panasonic ၏ 4K နည်းပညာကို လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ LUMIX G7 အသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည် ဗီဒီယိုကို 4K ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ (QFHD: 3840 x 2160 pixels, 25 fps, 100Mbit/s အထိ)။
ထို့အပြင် 4K Photo အင်္ဂါရပ်ဖြင့် 4K ဗီဒီယို (တစ်စက္ကန့်လျှင် ၃၀ ဖရိန်/ဓာတ်ပုံနှုန်း) ထဲမှ ပြီးပြည့်စုံသော ဓာတ်ပုံများကို ကင်မရာထဲတွင် ထုတ်ယူသိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး ၎င်းကို 8-megapixel နှင့် ညီမျှဆဲဖြစ်သော ရုပ်ပုံအဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
hybrid LUMIX G7 ကြောင့် ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများကို လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
နောက်လာမည့် ရုတ်တရက်ရိုက်ကူးနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါစေ။ Contrast AF တွင် Depth From Defocus (DFD) Auto Focus (AF) နည်းပညာ* ဖြည့်စွက်ထားသည့်အတွက် ခန့်မှန်းခြေ ၀.၀၇ စက္ကန့်နှုန်း**၌ ပို၍ တိကျပြီး မြန်ဆန်မှုကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်သက်တွင် တစ်ခါသာဖြစ်သော အခိုက်အတန့်လေးများကို ထာဝရတည်တံ့မည့် အမှတ်တရများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀% ရှိသော AF Tracking စွမ်းဆောင်ရည်*** ၊ ရုပ်ထွက်အပြည့်ဖြင့် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၈ ဖရိန်နှုန်းဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် UHS-II SDXC Memory Card ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
* DFD နည်းပညာသုံး Contrast AF သည် Panasonic ၏ Micro Four Thirds မှန်ဘီလူးများဖြင့်သာလျှင် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
** AFS တွင်၊ H-FS14140 နှင့်အတူ။
*** LUMIX G6 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသော Panasonic။
အရာတိုင်းကို နေရာမှန်ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မှု
LUMIX G7 သည် စတိုင်ကျပြီး ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ကိုယ်ထည်ကို ပိုင်ဆိုင်ရုံသာမက သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး လက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော လက်ကိုင်ကိုပုံဖော်ပေးထားကာ အလိုလျောက်သိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းလည်း ရှိပါသည်။ Live View Finder (LVF) သည် တောက်ပသောနေရောင်အောက်တွင်ပင် ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်ရန်ကူညီပြီး ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကလည်း ဆက်တင်များကို လွတ်လပ်စွာ စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်စေပါသည်။ အရှေ့/အနောက် ဒိုင်ခွက်များသည် ယာယီ WB နှင့် ISO ချိန်ညှိမှုများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူစွာ အကူးအပြောင်းလုပ်နိုင်ပြီး အဓိက အလင်းဝင်ပေါက်နှင့် Shutter အမြန်နှုန်းဆက်တင်များကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ ဆက်တင်များကို လုပ်ဆောင်ချက် ခလုတ် ၆ ခုအတွက် ခွဲဝေသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် drive mode ဒိုင်ခွက်ပေါ်ရှိ 4K Photo အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးပြီး 4K Photo mode ကို အမြန် သက်ဝင်အောင် လုပ်နိုင်သည်။
*ကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိ ခလုတ် ခြောက်ခုနှင့် မီနူးပေါ်ရှိ ခလုတ် ငါးခု
4K Video — Full HD ထက်ပို၍ အသေးစိတ်ကျကျ ရိုက်ကူးနိုင်မှု
ရုပ်ရှင်များကို ကြည့်ရှုရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ 4K သည် သင်ယခင်ကမြင်ဘူးခဲ့သည်ထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလွန်သည့် ကြည့်ရှုမှု အတွေ့အကြုံကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။ ၎င်း၏ မူလ ရုပ်ထွက် 3,840 x 2,160 pixels သည် အသေးစိတ်ကျသည်ထက်ပင် ပိုမိုသာလွန်သည့် အဆင့်မြင့် Full HD ထက် ၄ ဆ ပိုကြီးပါသည်။ 4K ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုကို Full HD TV သို့ ပေးပို့သည့်တိုင် ထို ဗီဒီယိုဖိုင်များသည် Full HD တွင်ရိုက်ကူးထားသည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖော်ပြချက်နှင့် ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသော အသေးစိတ်တို့ ရှိနေပါမည်။
・ဗီဒီယိုများကို 4K တွင် ရိုက်ကူးသော အခါ၊ UHS-IS Speed Class3အဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ကတ်ကို အသုံးပြုပါ
4K Photo — ပြီးပြည့်စုံသော အမှတ်ရဖွယ် အခိုက်အတန့်ကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးလိုက်ပါ
4K ၏ အရည်အသွေးမြင့်သော ရုပ်ထွက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ Panasonic LUMIX G7 ကင်မရာတွင် စက္ကန့်ဝက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့် ထိုဆန်းကြယ်သော အခိုက်အတန့်များကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်ရန် သင့်အား ဗီဒီယို (တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိန် ၃၀ နှုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော) ထဲမှ သီးသန့် အကွက်များကို ဆွဲထုတ်နိုင်စေသည့် 4K Photo လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ထားပါသည်။ 4K Photo ကိုသုံးကာ သင်၏ ကိုယ်ပိုင် " ပြီးပြည့်စုံသော အခိုက်အတန့်" နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်တွင် လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။
4K Photo Modes – လွတ်လပ်စွာ တီထွင်ဖန်တီးလိုက်ပါ
ထို 4K Photo လုပ်ဆောင်ချက်ကို မတူညီသည့် mode သုံးခုဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယင်းက တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိန် ၃၀ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးသည့် နှုန်းဖြင့် ထိုပြီးပြည့်စုံသော အခိုက်အတန့်အား ရိုက်ကူးနိုင်စေသည်။
ဓာတ်ပုံများစွာကို ရိုက်ကူးသည့် mode ကို အသုံးပြုသကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ Shutter ခလုတ်ကို နှိပ်ထားသ၍ အမြင့်မားဆုံးသော ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးမှုနှုန်း၌ 8-megapixel နှင့်ညီမျှသော ဓာတ်ပုံများကို ကင်မရာက ဆက်လက်ရိုက်ကူးပေးပါသည်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ဖရိန်မှန်သမျှကို 8-megapixel နှင့် ညီမျှသော ရုပ်ပုံအဖြစ် ရယူနိုင်ရန် 4K ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးနိုင်မည့် အဆင့်မြင့် 4K Photo လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရှိလာမည့် အမှတ်တရများကို အေးအေးဆေးဆေးဖြင့် စောင့်မျှော်လိုက်ပါ။
"4K Pre-Burst" mode ၏ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ Shutter ခလုတ်ကို မနှိပ်မီ တစ်စက္ကန့်အလို/နှိပ်ပြီး တစ်စက္ကန့်ကြာသည်အထိ 4K ဗီဒီယိုစီးရီးကို စတင်ရိုက်ကူးပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင် တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ထက် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်သော ထင်မှတ်မထားသော အမှတ်တရများအား ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၆၀ ကိုရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အကောင်းဆုံးကို ရယူနိုင်ပါသည်။
DFD နည်းပညာသုံး မြန်နှုန်းမြင့် အော်တိုဖိုးကပ်စ်ချိန်ပေးခြင်း
Panasonic ၏ Depth From Defocus (DFD) Auto Focus (AF) နည်းပညာ၏ ကျေးဇူးကြောင့် အလျင်မြန်ဆုံး ရွေ့လျားနေသော လှုပ်ရှားမှုကိုပင် ရိုက်ယူလိုက်ပါ*။ LUMIX G7 တွင် ဤအသစ်စက်စက် နည်းပညာကို အသုံးပြုထာပြီး ဖရိန်အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများအကြား အကွာအဝေးကို ဆက်တိုက်တွက်ချက်ပေးကာ အလွန်မြန်ဆန်ပြီး ဆက်တိုက်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့် မှန်ဘီလူးများ၏ ဖိုးကပ်စ်ကို ရွေ့လျားစေသည်။ ဤစနစ်သစ်သည် ၀.၀၇ စက္ကန့်အထိ** မြန်သော AF နှုန်းများကို ဖြစ်စေသည့်အပြင် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆ ဖရိန်နှုန်းရိုက်ကူးပေးသော Continuous Auto Focus်(AFC) ဖြင့် ဆက်တိုက် အများအပြားရိုက်ကူးသည့်နှုန်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရာတွင်လည်း ဆက်တိုက်ဖိုးကပ်စ်ချိန်သည့် တည်ငြိမ်စွမ်းကိုလည်း ၎င်းက တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
လျှင်မြန်ပြီး တိကျသော AF ခြေရာခံစနစ်
AF ခြေရာခံစနစ်၏ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်နည်းအသစ်ကိုအသုံးပြုကာ ရိုက်ကူးလိုသည့်အရာဝတ္ထု၏ အရောင်၊ အရွယ်အစားနှင့် လှုပ်ရှားမှု လားရာကိုညွှန်ပြသည့် ပမာဏကိုပါ မှတ်သားပေးပြီး ထိုအရာဝတ္ထုပေါ်တွင် ချိန်ဆထားမှုအား မလှုပ်ရှားအောင် ကင်မရာက ပို၍ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ရလဒ်မှာ ရိုက်ကူးမည့်အရာဝတ္ထုအား လွဲချော်သွားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်မည့် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀% သို့မဟုတ် ယင်းအထက် AF ခြေရာခံ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
*LUMIX G6 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသော Panasonic။
အလင်းရောင် အားနည်းသော အခြေအနေများတွင် ဆုံချက်ချိန်ခြင်း — Star Light AF
Low Light AF သည် အခြားအလင်းရောင် မရှိဘဲ ကြယ်များသာ လင်းလက်နေသည့် ကောင်းကင်ကဲ့သို့ မှောင်မည်းနေသည့် -4EV အလင်းမှိန်သော အခြေအနေများတွင် သင်ရိုက်ကူးလိုသည့် အရာပေါ်၌ ပိုမိုတိကျစွာ ဆုံချက်ချိန်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် LUMIX G7 သည် Starlight AF ဖြင့် အသစ်ထပ်မံ ပေါင်းစပ်ထားပြီး ပိုမိုသေးငယ်သော AF ဇုန်ထဲတွင် အလင်းအမှောင်ပြတ်သားမှု တန်ဖိုးကို မှန်ကန်တိကျစွာ တွက်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် ညဘက်ကောင်းကင်ယံရှိ ကြယ်များကို အော်တိုဖိုးကပ်စ်ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
အလင်းအားနည်းသော အနေအထားများတွင် ရိုက်ကူးသည့်တိုင် မြင့်မားသော ဓာတ်ပုံအရည်အသွေး ရရှိမှု
Venus Engine နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ထို 16 megapixel Digital Live MOS Sensor သည် မြင့်မားသော ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကို ဖမ်းယူနိုင်ရုံသာမက မြန်နှုန်းမြင့်အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော အစက်အပြောက်လျှော့ချပေးသည့် စနစ်သည် ISO 25,600 အထိ အလင်းအားနည်းသော အခြေအနေများတွင်ပင် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးပေးပါသည်။ ထို Venus Engine သည် သေးငယ်သော Aperture ဖြင့် ရိုက်ကူးသည့် အခါတွင်ပင် ရုပ်ပုံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး ရှင်းလင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် အလင်းရောင်စဉ်ဖြာထွက်သည့်စနစ်ကို အထူးကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုထားပါသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော မြင်ကွင်းနှင့် ဘောင်ခတ်ခြင်း
နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကျသောအခြေအနေများအောက်တွင်ပင် 10,000:1 အလင်းအမှောင်ပြတ်သားမှုရှိပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖရိန်ကွပ်ပေးနိုင်သည့် စနစ်ကြောင့် ပို၍ ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်စွမ်းကို ဖြစ်စေသည့် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသော (2,360k-dot) OLED တိုက်ရိုက် မြင်ကွင်းရှာဖွေကိရိယာတစ်ခုဖြင့် LUMIX G7 ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဆက်တင်အားလုံးကို သင့်မျက်စိရှေ့တွင်ပြသထားသည့်အတွက် သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း ရုပ်ပုံများ ထွက်ပေါ်စေရန် ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ အနောက်ဘက် မော်နီတာသည် နေသာချိန်တွင် ပြင်ပရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်သည့်အခါတွင်ပင် မြင်နိုင်စွမ်း ပိုမိုထင်ရှားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် စောင်းနိုင်/လှည့်နိုင်သော touch-ပြသစနစ် ပါရှိသည့်အတွက် တစ်ဖက်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လွယ်ကူစေကာ ပုံကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ပုံမှန်မဟုတ်သော ရှုခင်းများကို သင့်အား လွတ်လပ်စွာရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။
အတိကျဆုံးသော ဆုံချက်ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးစွမ်းရန် LUMIX G7 တွင် မည်သည့် ဧရိယာသည် ဆုံချက်တွင် ရှိနေသည်၊ နေရာ၏ အနက်သည် မည်မျှ ဝေးကွာသည်ကို သင့်အားပြသသည့် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရသော focus peaking လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါသည်။ သင်ရိုက်ကူးလိုသည့် အရာတိုင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော အခြေအနေတွင် ထင်ရှားပြတ်သားစွာ ရှိနေပြီး အချိန်တိုင်း ဖိုးကပ်စ်ချိန်ထားကြောင်း သေချာစေရန် ဖိုးကပ်စ်ချိန်ထားသည့် နေရာများကို စခရင်ပေါ်တွင် အရောင်ဖြင့် ပြသထားပါသည်။
တိရိစ္ဆာန်များကို ရိုက်ကူးခြင်း၊ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတွင် ရိုက်ကူးခြင်းကဲ့သို့ သင့်ကင်မရာကို အသံလုံးဝ ပိတ်ထားလိုသည့် အခြေအနေများစွာရှိပါမည်။ LUMIX G ကင်မရာများ၏ အီလက်ထရောနစ် Shutter ခလုတ်ကို အသုံးပြုသောအခါ မှန်ဘီလူးများထဲရှိ လျှင်မြန်ပြီး အသံတိတ် AF စနစ်နှင့် ရှတ္တာဆူညံမှု မရှိသည့်စနစ်၏ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် မှန်လွတ်စနစ်သည် ဆူညံသံကင်းမဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ LUMIX G ပါသော အသံတိတ်ရိုက်ကူးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားဓာတ်ပုံပညာရှင်များ လက်လှမ်းမမီနိုင်သော နေရာများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
Wi-Fi® မှတဆင့် သင့်၏ ဖန်တီးဆန်းသစ်မှုကို ကြိုးမသုံးဘဲ လုပ်ဆောင်ပါ
LUMIX G7 ၏ချိတ်ဆက်မှု အင်္ဂါရပ်များသည် သင့်ကင်မရာ၏ အသုံးဝင်မှုကို နည်းလမ်းများစွာ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်၊ focusသတ်မှတ်ရန်၊ အကွာအဝေးတစ်ခုမှ နေ၍ shutter ခလုတ်ကိုနှိပ်ရန် သို့မဟုတ် သင့် တက်ဘလက်၏ ကြီးမားသော စခရင်ပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် သင်၏ စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်ပေါ်ရှိ 'Panasonic Image App' ကို အသုံးပြုပြီး ကင်မရာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် သင့် ဓာတ်ပုံများကို လူမှုမီဒီယာများတွင်ပင် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
သင်၏ စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်ကို အသုံးပြု၍ လူမှုမီဒီယာများတွင် drag-and-drop (ဆွဲယူ၍ လွှတ်ချခြင်း) လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်အနှစ်သက်ဆုံးသော အခိုက်အတန့်များကို လွယ်ကူစွာ ဝေမျှပါ။
LUMIX G7 သည် သင့်စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်၏ GPS မှတ်တမ်း/တဂ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၎င်းသည် မည်သည့်နေရာဖြစ်သည်ကို တိတိကျကျ သိနိုင်ပါသည်။ သင့်ဓာတ်ပုံများကို နေရာဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် ဤဓာတ်ပုံနှင့်အတူ ၎င်းအား မည်သည့်နေရာတွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်ဆိုသော အချက်အလက်ကို အလိုလျောက်ရရှိပါလိမ့်မည်။
လျှင်မြန်ပြီး မှန်ကန်တိကျသော AF
ပြောင်းလဲ သုံးစွဲနိုင်စေရန် တိုးချဲ့နိုင်မှု
ပိုမိုပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးရန်အတွက်၊ ထို LUMIX G7 ကို DMW-FL580L ပြင်ပ ဖလက်ရ်ှမီး၊ DMW-MS2 Stereo/Shotgun Microphone နှင့် အခြားသော အပိုပစ္စည်းအများအပြားနှင့် ပေါင်းစပ် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
LUMIX G7 ကို သင်၏ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးမြင့်သော 4K ဗီဒီယိုများ၊ 4K ဓာတ်ပုံများနှင့်ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများကို RAW ဖိုင်များထဲတွင်သိုလှောင်ပေးနိုင်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် စွမ်းဆောင်ချက်မြင့်မားသည့် BUS Class UHS-I/UHS-II SDXC/SDHC memory cards များနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုများ နမူနာ ဓာတ်ပုံများ 4K ဓာတ်ပုံ
LUMIX G7 ပရိုမိုးရှင်း ဗီဒီယို
LUMIX ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ် ကင်မရာ DMC-G7 အသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း
LUMIX G7 နမူနာဗီဒီယို
ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာရှင် Colin Witherill မှ LUMIX DMC-G7 ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် လှပသော ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
LUMIX 4K Photo မိတ်ဆက်ဗီဒီယို II
လျှပ်တပြက် အခိုက်အတန့်လေးကို လက်မလွတ်စေရန် ဓာတ်ပုံပညာရပ်အတွက် တံခါးသစ်တစ်ချပ်ကို ဖွင့်ဟပေးသည့် 4K Photo ကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F1.4, 1/4000 sec, ISO 200
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F3.2, 1/4000 sec, ISO 200
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. | F4.0, 1/500 sec, ISO 400
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F1.8, 1/80 sec, ISO 400
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F4.0, 1/400 sec, ISO 200
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F1.6, 1/1250 sec, ISO 200
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F2.8, 1/2000 sec, ISO 200
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F1.2, 1/30 sec, ISO 400
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. | F4.0, 1/2500 sec, ISO 400
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. | F3.5, 1/1000 sec, ISO 200